Sida Tiger Woods, waxay leeyihiin dhalinyaro labaad - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo Sida Tiger Woods, waxay leeyihiin dhalinyaro labaad
Sida Tiger Woods, waxay leeyihiin dhalinyaro labaad
Sida "Tiger", halkan waa qaar ka mid ah cayaaraha fiidiyowga ah ee ku soo laabtay marxaladda horudhaca ka dib markii ay si xowli ah faarujiyeen.
Partager Suur Facebook Tweeter0 saamiyada
Sawir laga bilaabo ciyaarta Tiger Woods PGA Tour video game 14 (EA Sports - 2013)
Ku guuleystaha Augusta ee shanaad ee Masters ee xirfaddiisa, Tiger Woods wuxuu ka mid ahaa mid ka mid ah ugu soo laabashada weyn ee taariikhda ciyaaraha. Sababta wanaagsan, guushii ugu dambaysay ee Major waxay dib ugu noqotaa 2008 ! Sidii isaga oo kale ah, ruqsiyo dhowr ah oo ka mid ah cayaaraha fiidiyowga ayaa dib ugu soo laabtay horaantii iyagoo ammaankoodu u muuqday inay ka mid yihiin kuwii hore. Ka bilaabashada Pro Evolution Soccer, jilitaanka kubada cagta ee Konami ayaa lahaa marin dheer oo lamadegaanka ah iyadoo la imaanayo PlayStation 3 (waxaa sidoo kale ku jiray 2008). Xaaladda sannadlaha ah ayaa mar kale xaqiijineysa in kororkaasi kor u kaco bilaabay 2015. Haddii PES aysan awood u lahayn edbinta sida uu u awoodo inuu sameeyo saacadaha ugu weyn, waa inuu yahay mar kale waxay noqotaa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu weyn ee ciyaaraha isboortiga.
Mortal Kombat iyo Fighter Street ayaa muddo dheer ka soo wareegay siddeed
Xaaladda aadka loo jecel yahay 1990, laba kooxood oo dagaal ah ayaa si tartiib tartiib ah u hakin doona, gaar ahaan marka ay timaado 3D. Wareegii arkay Capcom's title isbedelka madadaalada caadiga ah ee ku saabsan hiwaayadaha nadiifinta ah, taas oo lumisay qeyb weyn oo ka mid ah ciyaartoydeeda. Jihaadayaasha waddooyinka ayaa markaa samayn doona nasasho toban sano ah (qalab dahab ah iyo xirmooyinka kale ee dhalashada), ka hor inta aysan ku noqonin waddada Street Fighter IV (2009). maanta SFV waa mid ka mid ah jewalada eSport.
Sida Mortal Kombat, waa xitaa xagjirnimo badan tan iyo markii taxanaha gebi ahaanba ka lumay maskaxda iyo maskaxda 'gamer' ka hor Warner Bros. ma bilaabin rebsho badbaadinta (2009). Kala-bixinta kow iyo tobanka ah ee laamiyada dhiigga ayaa la filayaa maalmo yar waxaana laga yaabaa inay buuxiyaan taageerayaasha jilitaanka.
Doom, dib ugu soo noqo albaabka hore
Long ka hor inta Call of Duty iyo dagaalka kale waa in caddibaadda waxaa loo tixgeliyaa inay Heerka dahab FPS ah. nooca A uu si firfircoon uga caawiyay In dadka la heer ah in aan had iyo jeer la hadal maanta caddibaadda-sida si ay uga wadahadlaan kulan toogashada-qof ugu horeysay. Dabooshay by onkod dagaal EA iyo Activision (kuwo kale), caddibaadda ayaa Millennium ahaan xasaasi ah, isagoo tirtira nafsaddiisa u sanado badan ka hor soo laabtay iyada oo albaabka hore, mar kale via reboot ah May 2016. dhacdooyinka soo socda, Khalqigana Qiyaame, ayaa la filayaa ka hor dhamaadka 2019 sanadka.
Xayawaanka Shilalka, sida ku jira maalmo wanaagsan
Ka muuqatay PlayStation ee 1996, cabsida nololeed ee Capcom ayaa sidoo kale marna la waayin. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu si tartiib tartiib ah uga fogaaday nuxurkiisa, isaga oo beddelaya waqtiyada walaaca iyo maareynta khayraadka xadidan oo leh isbeddelka qoryaha. Kacbada toddobaad ee dabada (oo lagu sii daayo 2017), ka dibna Xasilinta Xayawaanka 2 Resident Evil (laga soo bilaabo bilawga sanadka), u daji rikoodhada si toos ah adigoo ku dhajinaya ciyaartoyda tijaabooyin hore loo yiqiin, murugo qaadashada tallaabada ...
Si aad ugu noqoto Tiger Woods, wuxuu ahaan doonaa mid ka mid ah kan ugu saameynta ciyaaraha isboortiga. Wareegga PGA-da ee xayiraadiisa ayaa dhab ahaantii ka gudbi doona 25 million nuqul oo u dhexeeya 1998 iyo 2013. Calaamad muuqaal ah oo fiidiyoow ah.
KALA SOOCA DHAMMAADKA KA HADLO: WAA MAXAY WALAAL KA MID AH?
8 Xilliga Ciyaarta Thrones Waxay Soo Bandhigi Doontaa Isbedelka Ugu Maqan Yahay Muujin Kartid - BGR
Monolith Software wuxuu fidiyaa oo furaa studio shanaad
Jean-Pierre Mariel oo geeriyootay: "Waxa uu lahaa wax aad u yaab leh," ayuu sheegay Fabrice Luchini - VIDEO
Laba majaajiliiste Ruush ah ayaa sheeganaya inay ku xanibeen Macron kadib doorashadii madaxweynenimada ee Ukraine
MSN iyo Hotmail jabsaday: xog aad u xasaasi ah la xaday - Era Digital
Laba nin oo isqarxin ah oo ka soo jeeda Sri Lanka ayaa ahaa wiilal reer Colombo ah, sida ay sheegtay ilwareed
DADKA & LIFESTYLE3,111